OEM hoditra kitapo, Mpanamboatra kitapo kitapo | Gaofeng
Orinasa iray mifantoka amin'ny famokarana entana mandritra ny 20 taona miaraka amin'ny fitiavana sy matihanina.
Manokana manokana amin'ny famokarana karazana entona sy vokatra vita amin'ny hoditra, manokana amin'ny fanomezana
serivisy OEM manentana amin'ny mpanjifa.
Ny tanjonay dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifantsika amin'ny avo lenta sy kalitao azo antoka mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa tsirairay mahazo aina sy matoky tena amin'ny entana amidintsika ao amin'ny aplikasyon.Ony vokatra azonay dia mahita ny fangatahan'izy ireo avy eny an-tsena noho ny fananana tsara. Manana endri-javatra maro izy ireo izay manome antoka ny fampivoriana sy ny fampiharana azy.
Legioma matihanina Handbag legioma mpanamboatra menaka fanaka vita amin'ny hoditra
Ny legioma kitapo an-kitapo vita fanaka vita amin'ny hoditra menaka https://gfbags.com
Shina Briefcase nylon ny lamba fanakanana fonosana multilunction maro-
Kitapo ny kitapo orinasa aforitra nylon ny https://gfbags.com
Ny fanoratana lamba vita amin'ny kitapo tsara indrindra miaraka amin'ny mpamatsy hoditra
Ny fanoratana lamba vita amin'ny kitapo tsara indrindra miaraka amin'ny mpamatsy hoditra. Messenger Fanoronana lamba nylon ny hoditra amin'ny hoditra Taorian'ny fikarohana sy ny fampiharana nandritra ny taona maro dia nametraka rafitra fanaraha-maso tsara kalitao ny Shenzhen Gaofeng Co, Ltd. Ity vokatra ity dia manamora ny asa ary mampihena ny filàna fampiasana olona maro. Nahatonga ny fihenan'ny vidin'ny mpiasa izany. Messenger Bags nylon nylon ny lamba vita amin'ny hoditra Azo antoka ampiasaina io vokatra io. Tsy misy menaka poizina sy mpandraharaha ampiasain'ny fakana na fitaovana mandritra ny famokarana.
Sina Handbag Tenona mitana ny menaka mikrôvily vita amin'ny hoditra manidy fanakatonana
Ny fanantonana ny kitapom-panantonana kitapo handrakotra hoditra mikrofosotra https://gfbags.com
Ny fifanakalozan-kevitra mialoha ny famokarana
Na dia misy fivoriana mialoha ny famokarana taloha, fa alohan'ny dingana tsirairay, dia mbola misy fifanakalozan-dresaka kely, anisan'izany ny fomba fampiharana ny fahombiazana ny famokarana, ny fomba hanapahana ny fitaovana ho lasa loharano bebe kokoa, inona ny olana mety hatrehintsika mandritra ny famokarana. ny dingana, tsy maintsy dinihintsika ny olana rehetra. Ny fivoriana mialoha ny famokarana dia mifantoka amin'ny fizotran'ny famokarana manontolo, ary ity fifanakalozan-dresaka kely ity dia kendrena isaky ny dingana famokarana, ary hojerena kokoa ny olana resahina.
Ny endrika ataonao na ny santionanao na ny hevitrao, fandalinana Feasibility, dia mamorona drafitra mamolavola;
Mifidiana fomba fanamboarana fitaovana, loko ary ny fanaovana logo;
Manao santionany, 5.1 Fandefasana santionany amin'ny fisavana ny mpanjifa 5.2 Fitsapana santionany;
Hamafiso fa ny modely miakatra amin'ny fizotran'ny famokarana. Raha tsy afa-po ianao dia miverena amin'ny dingana faharoa, Manamboatra santionany mialoha ny famokarana ary andramana ny santionany;
Famokarana, hizaha toetra ny vokatra vita, Fonosana, Fandefasana.
Gaofeng dia mifantoka amin'ny famokarana entana sy kitapo marobe isan-karazany, ary miitatra hatrany amin'ny famokarana lamba hafa manokana.Gaofeng dia mifototra amin'ny foto-kevitra fa ny kalitao no fomba hahavelona, ​​ny vvhas dia mifehy hentitra ny famokarana.Mankasitraka mialoha ny fotoam-pitsarana hanatanterahana ny fizahana ny vokatra. , dia miezaka mafy isika ho ilay tsara indrindra.
Izahay dia manam-pahaizana amin'ny fanomezana serivisy OEM mora vidy amin'ny mpanjifantsika, maherin'ny atrikasa 2 000 metatra toradroa, ny stitching tsirairay dia nanamafy ny fisainantsika momba ny fiasa sy ny tanjon'ny esthetics.